Big City Small World (Series3Episode2- A Prize) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on July 12, 2013 at 10:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားစတင်လေ့လာနေသော Myanmar Network အသင်းဝင်များ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် ဤနေရာတွင် စကားပြောများကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းသင်ခန်းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင် နှင့် ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-worldတွင်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Series3Episode2- A Prize (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၂) ဆုလာဘ်)
မဂ်ဒါ အလုပ်လုပ်သည့် ဗိသုကာကုမ္ပဏီသည် ဆုရသည့်စာရင်းတွင်ပါနေသည်။ မဂ်ဒါ၏ ဒီဇိုင်းသည် လူတိုင်းအံ့အားသင့်သွားစေနိုင်သည်။ ဖာဒီနဲ့အိုလီဗီယာ တို့အခြေအနေကကော . . .
Series3Episode2- A Prize ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
အင်း။ ဒါနဲ့နေပါဦး ရှန်ပိန်များရှိလား။
ရှန်ပိန်လား။ ဒီကော်ဖီဆိုင်မှာတော့မရှိဘူးမဂ်ဒါ။ ဆိုင်မှားနေပြီ။
အဲ . . . ဘာမှတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။
ငါလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက . . .
အေး . . . ငါတို့ဆုတစ်ခုရဖို့အတွက် စာရင်းဝင်နေတယ်။
“စာရင်းဝင်တယ်ဟုတ်လား” ဒါဆို ဆုကမရသေးဘူးပေါ့။
ဟင့်အင်း။ ဒါပေမယ့် တို့အလားအလာကောင်းနေတယ်။
သိပ်မကြာခင် . . . အခုငါဖုန်းတစ်ခုမျှော်နေတာ။
ဒီတော့ပြောပါဦး အိုလီဗီယာ။ ဖာဒီနဲ့ကော အခြေအနေဘယ်လိုလဲ။ မင်းသူနဲ့ပြန်တွဲနေပြီလား။
အင်း . . . အဲ. . . မင်းသိတဲ့အတိုင်း . . .
ပြောစရာမရှိပါဘူး။ အင်း တို့တွေတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တော့ ထွက်လည်ကြပြီးတာပေါ့။ မနေ့ညက ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တို့တွေက ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းသက်သက်ပါ။
အေး တကယ်ပြောတာ။ ငါသူ့ကိုခင်ပါတယ်။ သူကတော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်မပိုဘူး။
တကယ်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းကြရအောင်။ မင်းနဲ့ကားလို့စ်အခြေအနေရော ဆာရာ။
တကယ်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တို့နှစ်ယောက်ဟာ လူချင်းမတူပေမယ့် စိတ်ချင်းတော့တကယ်နီးပါတယ်။
အင်းဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တော့ခက်တယ်ဟ။ သူက ဒီမှာရှိတဲ့သူ့အလုပ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ မကြာခင်ဘရာဇီးပြန်ဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်။ ငါအဲဒီကိုလိုက်သွားနိုင်ပါ့မလားမသိဘူး။
ဟုတ်တယ်။ တို့ဆုရမရ စုံစမ်းလိုက်ဦးမယ်။
ဟယ်လို။ ဟုတ် ဟုတ်ပါတယ်။ အိုး . . . အဲဒီတော့... အမ်. . . သိပါပြီ။ ဒီတော့. . . ဟုတ် . . ဟုတ်ပြီဟေ့ . . .
ကောင်းလိုက်တာ! တော်တယ် !
ဒီတော့ အဲဒါ မင်းပုံစံဆွဲပေးလိုက်တဲ့ အဆောက်အအုံပေါ့။
အမ် . . . ဒီ လိုလဲမဟုတ်ဘူး။
အင်း . . . တကယ်တော့ လက်ကိုင်တွေပါ။ တံခါးလက်ကိုင်တွေလေ။
ကဲ ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။ တံခါးလက်ကိုင်ဆိုတာအရေးကြီးတာပဲ။ မင်းဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။
အင်း ဒီလိုထင်တာပဲလေ။ အခုမှအစပဲ။
စိတ်မရှိပါနဲ့မိန်းကလေးတို့။ ရှန်ပိန်တော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ကော်ဖီထဲသကြားပိုထည့်ပေးမယ်။ အခမဲ့။
ကျေးဇူးပါတော် . . . တိုနီ။
Permalink Reply by SHINE THIRI LATT on July 20, 2013 at 9:53
Permalink Reply by kyaw htet aung on July 24, 2014 at 11:17